eHimalaya Online || News from nepal » लुकिछुपी लाएको प्रेम सार्वजनिक गर्दै क्याट्रीना र विक्की कौशल?
लुकिछुपी लाएको प्रेम सार्वजनिक गर्दै क्याट्रीना र विक्की कौशल?
२०७८ जेठ २३ गते आईतबार ०३:३७
बलिउड अभिनेत्री क्याट्रीना कैफ र अभिनेता विक्की कौशल हरेक दिन एक अर्कासँग देखिन्छन् र आजका दिन दुबै आफ्नो सम्बन्धको खबरले लागि चर्चामा छन । ती दुबैको तस्वीर हरेक दिन दुबै सँगै रहेको तस्बिले दुबै सँगै भएको प्रमाण दिन्छ। ...
बलिउड अभिनेत्री क्याट्रीना कैफ र अभिनेता विक्की कौशल हरेक दिन एक अर्कासँग देखिन्छन् र आजका दिन दुबै आफ्नो सम्बन्धको खबरले लागि चर्चामा छन । ती दुबैको तस्वीर हरेक दिन दुबै सँगै रहेको तस्बिले दुबै सँगै भएको प्रमाण दिन्छ।
कहिलेकाँही दुबै पार्टीहरू र कहिलेकाँही कार्यक्रमहरूमा सँगै देखा पर्दछन्। साथै, कहिलेकाँही दुबै एक अर्काको घरमा जाँदा पनि देखिन्थ्यो। तर हालसम्म दुबैले उनीहरूको सम्बन्धको खबरमा केही भनेका छैनन्। दुबैले यो समाचारमा प्रतिक्रया दिनबाट जोगिन्थ्यो र एक अर्कालाई साथी मात्र भएको बताउछन ।
तर अब खबर आउँदै छ कि दुबै आफ्नो सम्बन्ध सबैको अगाडि स्वीकार्दैछन । हो, प्रसिद्ध वेबसाइटको रिपोर्टका अनुसार क्याट्रिना र विक्की एक जोडीको रूपमा देखिने छन् र दुबै सोशल मीडियामा पोस्ट गरेर सबैलाई यस बारे बताउन सक्दछन्।
यस्तो रिपोर्टहरू पनि छन् कि विक्कीका बुबा चाहदैनन् कि विक्किले त्यस्तो कदम चालोस र उनले ठूलो निर्णय लिनु अघि वीक्कीलाई चे,तावनी दिएका छन्। रिपोर्टमा यो पनि दावी गरिएको छ कि क्याट्रिना चाहिँ वीक्कीले अरु स्टारसँग रोमान्टिक सिन गरेको चाहँदैनिन्। यसैको अनुमान लागाउन सकिन्छ यी दुबैले छिट्टै आफ्नो सम्बन्ध खुलाउन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २३ गते आईतबार ०३:३७